के हो सुहागरात ? « News of Nepal
धेरैजसो युवालाई सुहागरातका बारेमा थाहा हुँदैन । सुहागरातमा केटा पक्षले गर्ने जबरजस्तीका कारण केटी पक्षले सधैँ आशंका र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तै त्यस रोमान्टिक क्षणलाई सम्झनायोग्य बनाउन नसक्दा धेरैका लागि सुहागरात अर्थहीन रात बन्न पुगेको छ ।
नारीहरूले सुहागरातका अघिल्ला दुई चरणमा पुरुषको धैर्य, अर्काको संवेदनशीलताप्रतिको उसको प्रतिक्रिया र उसको स्वार्थको सीमालाई विभिन्न कसीमा विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छन् । विश्वासको वातावरण त्यसै पैदा हुँदैन । धेरै आग्रही र धेरै आतुर पुरुषलाई नारीले कम विश्वास गर्छन् । त्यसकारण सुहागरातको समयमा पुरुषले जति धैर्य धारण गर्नसक्यो फाइदा पुरुषलाई नै छ । तातो तावामा रोटी छिटो पनि पाक्छ र अपच हुने डर पनि हुँदैन । यो बेग्लै कुरो हो– तावा तात्न समय लाग्छ । तर, रोटी खाएर स्वस्थ रहन चाहनेका लागि त्यो आवश्यक पूर्वाधार हो ।
कुमारीत्व र सुहागरातसँग जोडिएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ– त्यो हो कुमारीझिल्ली । यसको चर्चाविना यो लेख अधुरै रहनेछ । अंग्रेजीमा हाइमेन र संस्कृतमा कौमार्य झिल्ली भनिने यो झिल्ली योनिको मुखैमा अलि भित्रतिर रहेको हुन्छ । कसैमा यो झिल्ली बच्चादेखि नै हुँदैन वा एक कुनामा सानो मात्र हुन्छ । धेरैजसोमा इलास्टिकजस्तो यो झिल्ली योनिको एक भित्तादेखि अर्को भित्तासम्म फैलिएर रहेको हुन्छ । पहिलो सम्भोगसम्म यो झिल्ली योनिमार्गको मुखमा छ भने सम्भोगका बेला फाटेर हलुका रगत आउन सक्दछ र अरू एकदुई दिन योनिको मुखमा हलुका सुजन हुन सक्दछ । तर, सानै उमेरमा खेल्दा, कुद्दा वा लड्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आघातले यो झिल्ली आफैँ च्यातिन सक्छ । यस झिल्लीको बीचमा महिनावारीको रगत जान सानो प्वाल हुन्छ ।
कसैकसैमा यो प्वाल ठूलो भएर त्यसैबाट यौनसम्पर्क सम्भव हुन्छ र बुढेसकालसम्म यो योनिको भित्तामा मात्र रहिरहन्छ भने अर्कातिर कसैकसैमा यस झिल्लीको बीचमा महिनावारीको रगत जान हुनुपर्ने प्वाल नभएका कारण रजस्वला हुन थालेपछि सानो शल्यक्रियाको प्रक्रियाद्वारा रगत जाने बाटो खोल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पहिलो यौनसम्पर्कमा कुमारीझिल्ली फाटेर रगत आएन भने त्यसलाई चरित्रहीनता अथवा पहिल्यै यौनसम्पर्क भएको प्रमाण मान्नु पनि गलत हो अनि कुमारीझिल्ली फाटेर रगत आउनुलाई मात्रै पहिले यौनसम्पर्क नभएको प्रमाण मान्नु पनि गलत हो । कुमारीझिल्लीको नाम कुमारीत्वसँग जोडिए पनि त्यो कुमारीत्वको अकाट्य प्रमाण भने होइन ।
(डा. सुबोधराज पोखरेलको फेसबुकबाट)